भुवन–जिया ओपन सेक्रेट - फ्रन्टपेज - साप्ताहिक
भुवन–जिया ओपन सेक्रेट
जेष्ठ १८, २०७५
अभिनेता भुवन केसी र जिया केसी लिभिङ टुगेदरमा छन् भन्ने हल्ला अब नौलो रहेन । केही वर्षदेखि यो चर्चित लभ बर्ड भुवनको पुरानो बानेश्वरस्थित घरमा बस्दै आएको बताइन्छ । यद्यपि लिभिङ टुगेदर र प्रेमसम्बन्धका बारेमा न भुवन केही बोल्छन्, न जिया नै मुख खोल्छिन् । गुपचुप रूपमा डेटिङमा रमाइरहेको यो जोडीको सम्बन्ध नेपाली फिल्मी बजारमा छताछुल्ल फैलिएको छ । साथी मात्र हौं भन्दै पन्छिने जिया र भुवनले देश–विदेशको भ्रमण सँगै गरे पनि किन आफ्नो सम्बन्धलाई साथीको नाम मात्र दिइरहेका छन्, त्यो उनीहरूलाई मात्र थाहा छ ।
भुवन र जियाले आफूहरूबीचको सम्बन्ध लुकाउन हदैसम्मको प्रयास गरें, तर त्यो सधैं सम्भव हुने कुरा थिएन । चलचित्र ‘कृ’ को एउटा गीतको छायांकनका लागि स्कटल्यान्ड जाँदा भुवनले जियालाई पनि सगैं लगेका थिए । एयरपोर्टमा जियालाई केही समय लुकाउन खोजे पनि मिडियाले देखेपछि भुवनले बाध्य भएर जियालाई आफूतिर ल्याएर सँगै तस्बिर खिचाए । केही समयअघि फान एवार्डमा जिया र भुवन एकसाथ देखिए । यसअघि चलचित्र ड्रिम्सको छायांकनका बेला जिया पोखरा पुगेकी थिइन् ।
भुवन हालसालै जियालाई लिएर चलचित्र क्याप्टेनको लोकेसन खोज्न सिक्किम पुगेर फर्किएका छन् । पछिल्ला घटनाक्रमहरूबाट भुवन र जियाको सम्बन्ध कति नजिक छ, अनुमान लगाउन गाह्रो पर्दैन । मित्रता गाँसिएसँगै भुवन र जिया नेपालका धेरै ठाउँ पुगेका छन् । यद्यपि जहाँ पुगे पनि यो जोडीले सँगै तस्बिर खिचाएर फेसबुकमा राखे पनि प्रेम सम्बन्धमा परेको कुरा भने सार्वजनिक गरेका छैनन् ।
जियाले भुवन र अनमोलसँगका आफ्ना तस्बिर सेयर गरिरहेकी छिन् भने भुवन पनि बेलामौकामा जियासँगका तस्बिर सेयर गरिरहेका हुन्छन् । जियाले भुवन र अनमोलसम्बन्धी समाचारहरू निरन्तर सेयर गरेर परिवारकै सदस्य हुँ भन्ने झझल्को दिइरहेकी छिन् सामाजिक सञ्जालमा पनि । जिया र भुवन कैयौं पटक सँगै चलचित्र हेर्न पुगेका छन् । यो जोडीसँगै काठमाडौंका विभिन्न गजल रेस्टुराँदेखि लिएर अन्य समारोहसम्म पुगेको पाइन्छ ।
जियाको बढ्दो भूमिका
जिया भुवनको परिवारलाई आफ्नो हातमा लिन खोजिरहेकी छिन् । उनले भुवनपुत्र अनमोल केसीका लागि अभिनेत्री छनौट गर्नेदेखि मिडियासँग सम्बन्ध बनाउने कुरामा समेत भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पाइन्छ । धेरैलाई थाहा नहुन सक्छ, चलचित्र ‘ड्रिम्स’ की अभिनेत्री साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाहलाई जियाले नै रोजेकी थिइन् । अनमोल अहिले चलचित्र ‘क्याप्टेन’ मा व्यस्त छन् । यो चलचित्रका लागि दुई जना नव–अभिनेत्री फाइनल गरिएको छ, जसमा उपासनासिंह ठकुरी तथा प्रियंका एमभी छन् । यी दुवै अभिनेत्री पनि जियाले नै खोजेकी हुन् ।
उनले इन्स्टाग्राममा तस्बिर देखेपछि आफैंले उपासना र प्रियंकासँग कुराकानी गरेकी थिइन् । उपासनाले केही समयअघि कुरा गर्दै भनेकी थिइन्, ‘मलाई चलचित्र खेल्छु भन्ने लागेको थिएन, तर जिया दिदीले मेरो तस्बिर इन्स्टामा देखेपछि बोलाउनुभयो । उहाँले चलचित्रमा काम गर्न प्रोत्साहित गर्नुभयो र म तयार भएँ ।’ अर्की अभिनेत्री प्रियंकाको खोजी पनि जियाले नै गरेकी हुन् । जियासँग कुरा भएपछि प्रियंका यो टिमसँग जोडिएकी थिइन् । यो मामिलामा जियाको रोजाइलाई नै भुवन र अनमोलले सदर गरेका हुन् ।
स्वीकार गर्न किन गाह्रो ?
भुवन र जियाको मित्रता गाँसिएको लामै समय भैसकेको छ । फेसबुकमा जिया र भुवनका टन्नै तस्बिर सेयर भैसकेका छन् । उनीहरू देशविदेश सँगै घुमेका छन् । विभिन्न सार्वजनिक कार्यक्रममा सँगै पुगेका छन् । मिडियाले उनीहरूका बारेमा प्रशस्त समाचार तथा गसिप सार्वजनिक गरिरहेका छन् । अनलाइन, युट्युब तथा पत्रपत्रिकामा उनीहरूको सम्बन्धलाई लिएर अनेकन् खबर छापिएका छन्, तर उनीहरू आफैंले भने ती समाचारमा कुनै ध्यान दिएका छैनन् ।
उमेरले ६० वर्ष पुग्न लागिसकेका भुवन केसी अझै पनि उत्तिकै आकर्षक देखिन्छन् । कहिल्यै जिम र व्यायाम नगर्ने भुवन उत्तिकै ह्यान्डसम पनि छन् । केसी चलचित्रका सर्वाधिक सफल कलाकारसमेत हुन् । उनी अभिनयमा पनि सफल छन् । उनले निर्माण गरेका अधिकांश चलचित्र सुपर हिट भएका छन् । यद्यपि भुवन पारिवारिक हिसाबले भने असफल मानिन्छन् । अनमोल, विवेक र काजलका बुबा भुवनले जियालाई पारिवारिक रूपमा एकदमै नजिक बनाइसकेका छन् । दुई पटक श्रीमतीलाई रिझाउन नसकेका भुवनले अहिले जियालाई भने विवाह नै नगरी श्रीमतीजस्तै बनाएर मात्र किन राखेका होलान् ? भन्ने प्रश्नको रहस्य अहिलेसम्म रहस्यमै छ ।
भुवनको दाम्पत्य जीवनलाई फर्किएर हेर्दा मागि विवाह टिकेन, भागी विवाह पनि टिकेन । दुवै विवाह टुट्नुमा भुवनकै हात छ भन्ने आरोप पनि नलागेको होइन । भुवनकी पहिलो श्रीमती थिइन् विजया मल्ल । उनीसँग भुवनले मागी विवाह गरेका हुन । छोरी काजल र विवेकको जन्मपछि भुवन र विजयाबीचको सम्बन्धमा फाटो आएको हो । विजया सम्बन्धविच्छेद गरी छोरा र छोरी लिएर अमेरिका गइन् । मागी विवाह नटिकेपछि भुवनले भागी बिहे गरे सुस्मिता बमजनसँग । विवाहपछि सुस्मिताले चलचित्रमा काम गरिन् । उनी पहिलो चलचित्रबाटै हिट भइन् ।
सुस्मिताले ‘करोडपति’ बाट डेब्यु गरेकी हुन् । भुवनसँगको विवाहपछि सुस्मिताले छोरा अनमोललाई जन्म दिइन् । सुस्मिताको व्यवसायिक जीवन राम्रो गतिमा अघि बढिरहेकै बेला भुवनसँग भने ठाकठुक पर्न थाल्यो । बिस्तारै उनीहरूको सम्बन्ध बिग्रँदै गयो । अन्तत: उनीहरू कानुनी रूपमै अलग भए । सुस्मिताको पछिल्लो चलचित्र पिंजडा ब्याक अगेन केही समयअघि मात्र प्रदर्शनमा आएको थियो । यो जोडीका एक मात्र सन्तान अनमोल केसी अहिलेका सबैभन्दा चर्चित अभिनेता हुन् । भुवनले दुईवटा विवाह नटिकेकै कारण तेस्रो विवाहप्रति अनिच्छा देखाएका हुन सक्छन् । त्यसैले उनी जियालाई एकदमै मिल्ने साथीमा सीमित राख्न चाहन्छन् ।
भुवनका दुई सारथि
भुवन बिन्दास स्वभावका अभिनेता हुन । अनमोल चम्किएसँगै भुवन निकै खुसी छन् । केसी भन्छन्, ‘अनमोल नेपालको पहिलो त्यस्तो सेलिब्रेटी हो, जसको जत्तिको स्टारडम अहिलेसम्म कसैले कमाउन सकेन ।’ अनमोलको कामप्रति आफू निकै खुसी र सन्तुष्ट भएको उनी बताउँछन् । भुवनले अनमोललाई आफ्नो इसारामा चलाइरहेको आक्षेप पनि नलगाइने होइन, तर भुवन भन्छन्, ‘अनमोल मेरो छोरा मात्र हो, बाहिरी दुनियाँका लागि ऊ कलाकार हो, उसलाई अभिभावकका हिसाबले सम्झाउने र सुझाव दिनेबाहेक म अरू कुनै हस्तक्षेप गर्दिनँ । उसको जीवनमा उसकै डिसिजन चल्छ ।’ भुवनका अहिले दुई सारथि छन्— अनमोल र जिया । यी दुई पात्रले भुवनलाई परिवारमा कसैको अभाव महसुस हुन दिएका छैनन् ।
होला त विवाह ?
खुल्लमखुल्ला हिँडिरहेको यो जोडी औपचारिक रूपमा विवाह गरेर कहिले श्रीमान्–श्रीमतीको हैसियतमा पुग्ने हुन् भन्ने कुरा थाहा पाउन केही समय कुर्नैपर्छ । उनीहरूको सम्बन्धका जानकार निकटतम व्यक्तिहरू पनि दुई प्रकारका टिप्पणी गर्छन् ।
कतिपय जिया र भुवनको विवाह हुने सम्भावना प्रबल छ भन्छन् भने कतिले उनीहरू अहिले जुन हिसाबले सम्बन्ध अघि बढाइरहेका छन्, त्यसमै सीमित हुन्छन् पनि भन्छन् । उनीहरूको घरमा निरन्तर पुग्ने एक चलचित्रकर्मी भन्छन्, ‘जिया र भुवनजीलाई मैले धेरै समयदेखि साथै देखिरहेको छु, विवाह नभए पनि उहाँहरूबीच राम्रो तालमेल भए सक्किगो नि †’ कुनै बेला जियाले आफू ‘भुवनसँग विवाह गर्न तयार रहेको’ बताउँदा त्यसलाई ठट्टाका रूपमा लिइएको थियो ।
भुवनले पनि उक्त टिप्पणीमा जियाले फ्यानका हिसाबले भनिन् होला भन्दै जवाफ फर्काएका थिए । जियाले २०७२ सालको दसैंमा भुवन केसीको घरमै पुगेर सँगै टीका लगाउनुलाई निकै अर्थपूर्ण मानिएको थियो भने कतिपयले उनीहरूको विवाह भैसकेको आशंकासमेत गरेका थिए । जियाले केही वर्षअघि नै भुवनलाई मन पराउँछु भनिसकेकी थिइन् । जिया र भुवननिकटका अर्का चलचित्रकर्मी भन्छन्, ‘बाहिर कस्तो हल्ला छ थाहा भएन, तर उहाँहरूको सम्बन्ध घनिष्ठ छ । यो सम्बन्ध लामो समयदेखि चलिरहेको छ । अब त्यो लिभिङ टुगेदर हो कि मित्रता मात्र ? त्योचाहिँ उहाँहरूलाई नै थाहा होला ।’
को हुन् जिया ?
दीपक श्रेष्ठले निर्माण गरेको चलचित्र ‘हो यही माया हो’ बाट रंगीन संसारमा प्रवेश गरेकी हुन्— जिया केसी । झापाबाट अभिनेत्री बन्न काठमाडौं आएकी जियाले उक्त चलचित्रपछि एटिएम, बर्बाद, वाचा, रिङरोड, रङ वे आदि चलचित्रमा अभिनय गरिन् । पछिल्लो समय भने उनी चलचित्र अभिनयबाट लगभग अलगजस्तै छिन् ।
के भन्छिन् जिया ?
जिया यो विषयमा केही बोल्न चाहन्नन्, तर जियाले यसअघि बोलेका धेरै कुरा युट्युबमा फेला पार्न सकिन्छ । उनका पुराना अन्तर्वार्ताहरूबाट पनि धेरै कुरा प्रस्ट हुन्छ । एक समाचारमा जनाइएअनुसार जिया भन्छिन्, ‘उहाँ (भुवन केसी) मलाई अत्यन्तै मन पर्नुहुन्छ । उहाँ स्टार हो । उहाँको स्टाइल, गेटअपदेखि सबै कुरा राम्रो छ । मलाई उहाँ छोटो समयमै निकै मन पर्नुभएको हो । उहाँ मेरा बारेमा के सोच्नुहुन्छ थाहा छैन, तर म भने उहाँलाई एकदमै मन पराउँछु ।
के चाहन्छिन् सुस्मिता ?
भुवन केसीसँग डिभोर्स भैसकेपछि सुस्मिता बमजन अहिले एक्लो जीवन बिताइरहेकी छिन् । एक्लो जीवन बिताइरहे पनि सुस्मिताले भुवन, अनमोल तथा जियाका बारेमा बोल्न भने छाडेकी छैनन् । उनी भुवन केसीको निकै चर्को आलोचना गर्छिन् भने जियाका सम्बन्धमा पनि टीका–टिप्पणी गरिरहेकी हुन्छिन् । सुस्मिताले फेसबुकमा राख्ने स्टाटस मिडियाका लागि मसला भैरहेका छन् । यता भुवन सुस्मिताका बारेमा कुरा गर्न चाहँदैनन् । सदावहार नायक केसी भन्छन्, ‘उहाँका बारेमा कुरै नगरेको राम्रो । खै किन नचाहिने कुरा गरिरहनुभएको छ, थाहा छैन । बरु खुरु–खुरु आफ्नो काममा लागे हुन्थ्यो नि !’
यसो भन्छन् भुवन
यसअघि मिडियामा धेरै कुरा भनिसकेकाले म यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्नँ । म के सम्म भन्छु भने हामीले विवाह गर्ने–नगर्ने विषयमा केही सोचेका छैनौं । सोच्दै नसोचेको विषयमा केही भन्न मिलेन । भविष्यको कुरा त्यति नै बेला थाहा होला । जिया निकै असल साथी हुन्, मेरी राम्रो साथी हुन्, शुभचिन्तक हुन् । उनको बोली–व्यवहारदेखि लिएर सबै कुरा राम्रो छ । सहयोगी भावना छ । नेगेटिभ पक्ष कहीं–कतै देख्दिनँ । उनको जति प्रशंसा गरे पनि कम नै हुन्छ ।
प्रकाशित :जेष्ठ १८, २०७५
होली विशेष गीत–संगीत
उपासना र प्रियंकाको प्रेममा अनमोल
शिवरात्रिको पूर्वसन्ध्यामा अनमोल र आशिरमानको टक्कर
मुड होलीको कलाकार र होली चैत्र ४, २०७५
सी डिसाइड्स–सी क्यान फाल्गुन २७, २०७५
जो सामाजिक सञ्जालबाट टाढा छन् फाल्गुन २३, २०७५
आशा जगाउने आइकनहरू फाल्गुन १३, २०७५
आशा जगाउने आइकनहरू फाल्गुन ११, २०७५
आकर्षक महिला फाल्गुन २, २०७५
आकर्षक पुरुष फाल्गुन १, २०७५
आकर्षक महिला/पुरुषका बारेमा कसले के भने ? माघ २८, २०७५
आकर्षक महिला–पुरुष माघ २७, २०७५
एउटा पुरुष यौनकर्मीको बयान १ लाखसम्म खर्च लिन्छु माघ २२, २०७५